Ukuphupha ngeParasite Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Isibetho sisifo esosulelayo esibi esichazwa njengesosulelayo kakhulu kwaye esidla ngokubulala kwabo bachaphazelekayo. Abameli abaziwayo kwesi sifo sisibetho se-bubonic kunye nesibetho semiphunga.
KumaXesha Aphakathi, njengengqakaqha, isibetho sonakalise amatyeli aliqela kwaye sahlalisa yonke imimandla. Esi sifo sasosulela abantu ngeentakumba ezivela kwiimpuku ezifana neempuku. Isifo somoya siyasasazeka ngokusulelwa ngamathontsi, njengokukhohlela nokuthimla.
Namhlanje, ngenxa yamayeza anamhlanje, amayeza okubulala iintsholongwane anokunyanga isibetho kakuhle. Ngenxa yokuba ayikatshabalaliswa ngokupheleleyo okwangoku. Iziganeko zesibetho zisaxelwa, ngakumbi e-Afrika nase-Asiya.
1 Uphawu lwephupha «isibetho» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «isibetho» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «isibetho» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «isibetho» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha ubona kumfanekiso wephupha "isibetho" isibonakaliso sephupha ishishini lakho elikulo el mundo Ukuvuka kuya kukhula kakubi. Inokuba ikule ndawo ilahleko ubunzima. Kwakhona kunokubakho iingxaki kumbutho.
Ukuba uphupha ngendyikitya yokufa kwaye uphile, uya kuba nakho ukukhusela iiprojekthi zeshishini lakho kwilahleko ngezenzo zobulumko neziqwalaselweyo. Nabani na oqonda imiqondiso yesibetho se-bubonic kuye, njengokudumba kunye namaqhuma, ephupheni unokufumana okulungileyo kwihlabathi elivukayo. Imeko yezempilo kunye nobomi bosapho obulungileyo.
Ukuba umntu oleleyo uzama ukubaleka isibetho xa elele, uya kuthi kungekudala abe sesinye inkinga ayizukuba lula ukuyisombulula. Ukubona imaski yesibetho okanye imaski yobuso inokuba luphawu lwephupha olubonisa ukuba awufuni ukuzityhila ngaphakathi ngaphakathi kwabanye.
Ukuba abantu abaninzi bayafa sisibetho ebuthongweni babo, oku kungabacebisa ukuba bakhululeke ekutsaleni ngokweemvakalelo kwaye bangene kwinqanaba elitsha lobomi. Ukuba ubona abantu besifa sisibetho ephupheni, ngokuthetha ngokubanzi, unokufumana okwenyani ekuvukeni ubomi. ugxothiwe yomntu othile ngaphambili.
Uphawu lwephupha «isibetho» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokutsho kohlalutyo lwengqondo lwephupha, uloyiko olusisiseko lweemvakalelo lunokubonakala kwiphupha lokufa elimnyama. Umphuphi kufuneka axhalabele ngakumbi eyakhe ilizwi elingaphakathi mamela okanye ujongane nayo.
Njengobhubhane ephupheni, uphawu lwephupha "isibetho" sinokuchaphazela ukungazithembi ngokunjalo Ukungaqiniseki Chaza into anayo umntu lowo ngokunxulumene nezenzo zakhe. Ukuba umntu ophuphayo woyika esi sifo xa elele, mhlawumbi inokuba iyamongamela ebomini. Kuya kuba bubulumko ukufumanisa ukuba yintoni. Kungenxa yokuba kuphela emva koko unokuphila ubomi obungenakukhathazeka.
Ukuba isibetho sikhatshwa zizilonda kwaye sibole ephupheni, umntu kufuneka azame uxinzelelo kwaye Ukuxinezeleka ukunciphisa kwilizwe lokwenyani. Ukubona kwabantu abafileyo kwiingubo, ababulawa sisibetho, kunokuba sisikhumbuzo sokuphupha sokujongana neempazamo zexesha elidlulileyo. Kuba kujongeka ngathi ayikenziwa.
Uphawu lwephupha «isibetho» - ukutolika kokomoya
"Isibetho" isimboli sephupha sinokugqithisa kwinqanaba lokomoya lokuhlalutya iphupha. Ukuzisola lomntu uphuphayo, omthuthumbisa ngokungapheliyo kwilizwe elivukayo.